Medjugorje: Ozi ndi nne anyi di aso nke ozioma | EKPERE NA OZI
Medjugorje: Ozi nke nne anyi noo na ozioma
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 8, 2020 Ọgọstụ 8, 2020
Septemba 19, 1981
Gịnị mere i ji ajụ ọtụtụ ajụjụ? Azịza ọ bụla dị na ozioma.
Ozi e dere n’ụbọchị Ọgọst 8, 1982
Na-atụgharị uche kwa ụbọchị na ndụ Jizọs na ndụ m site na ikpe Chapleti.
Nọvemba 12, 1982
Agakwala ịchọ ihe ndị pụrụ iche, kama were Oziọma ahụ, gụọ ya ihe niile ga-edo gị anya.
Ozi akara ụbọchị nke iri na atọ nke ọnwa iri na atọ n’afọ 13
Gbanyụọ televishọn na redio, ma soro usoro Chineke: ntụgharị uche, ikpe ekpere, ịgụ Oziọma. Jikere maka okwukwe ekeresimesi! Mgbe ahụ ị ga-aghọta ihe ịhụnanya bụ, ndụ gị ga-ejupụtakwa n'ọ joyụ.
Machị 28, 1984
«Kpee ekpere. O nwere ike iju gi anya na m na-ekwukarị banyere ekpere. Otu osila dị, a na m agwa gị: kpee ekpere. Egbula oge. Na ozioma ị gụrụ: "Echegbula onwe gị maka echi ... Eachbọchị ọ bụla zuru mgbu ya". N’ihi ya, echegbula onwe gị maka ọdịnihu. Naanị kpee ekpere na m, nne gị, ga-elekọta ndị ọzọ ».
Machị 29, 1984
«Achọrọ m ka ị gbakọta na ụka n’ụbọchị Tọzdee ọ bụla ị ga-akpọ isiala nye Nwa m nwoke Jesus. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe gị omume ịbịa ụka, gụgharịa akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ n'ụlọ gị. Ọzọkwa, na Tọzdee ọ bụla, onye ọ bụla n’ime unu ga-achọta ụzọ ọ ga-esi chụọ ihe ụfọdụ n’àjà: ndị na-ese anwụrụ anaghị ese anwụrụ, ndi na-a drinkụ mmanya na-aba n’anya. Onye ọ bụla na-ahapụ ihe masịrị ya karịsịa. "
Mee 30, 1984
Ndi nchu aja kwesiri ileta ezinulo, karie ndi n’enweghi okwukwe, ndi chefuru Chineke, ha gha ewetara ndi mmadu ozi oma nke Jisos ma kuziere ha otu esi ekpe ekpere. Ndị ụkọchukwu n’onwe ha kwesịrị ikpe ekpere karịchaa. Ha kwesiri inye ndi ogbenye ihe ha adighi.
Mee 29, 2017 (Ivan)
Ezigbo ụmụ m, ọbụlagodi taa achọrọ m ịkpọ gị ka ị bute Chineke ụzọ na ndụ gị, ibute Chineke ụzọ n’ezinaụlọ gị: nabata okwu ya, okwu nke Oziọma ahụ ma bie ndụ ha na ndụ ezinụlọ gị. Ezigbo ụmụaka, n'ụzọ pụrụ iche n'oge nke a, a na m akpọku ụnụ H. Mass na Oriri Nsọ. Gụkwuo Akwụkwọ Nsọ n'ime ezinụlọ gị na ụmụ gị. Ekele dịrị unu, ezigbo ụmụ m, maka ịza m oku m taata.
Eprel 20, 2018 (Ivan)
Childrenmụaka m hụrụ m, m chọkwara taa ịgwa m na Ọkpara m kwere ka m nọnyere unu oge a n'ihi na m chọrọ ịkụziri unu ihe, kuziere unu ihe ma duru unu gaa n'udo. Achoro m iduba gi na Nwa m. Yabụ, ụmụ m, nara ozi m ma bie ndụ m. Nabata Ozi Ọma, bie Ozi Ọma! Mara, ụmụ, na nne na-ekpe ekpere maka unu niile, na-arịọchitere unu arịrịọ maka Ọkpara ya. Umu nnem, unu ekelewo m maka ịza oku a na-akpọ m taa.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ezi ofufe n'oge a: aja nke Mass di Nsọ
Next Post → Post ozo:Pope Francis zigara onyinye na Beirut maka mgbake